China Lug Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - မှတ်တိုင်
အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လိပ်ပြာအဆို့ရှင် > Lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
အဆိုပါ lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏လိပ်ပြာပန်းကန်ပိုက်လိုင်း၏အချင်း ဦး တည်ချက်အတွက်တပ်ဆင်ထားသည်။ butterfly valve body ရဲ့ cylindrical channel မှာ disc-shaped butterfly plate က ၀ င်ရိုးပတ်ပတ်လည်လည်သွားတယ်။ လည်ပတ်ထောင့်က ၀ မှ ၉၀ ဒီဂရီကြားမှာရှိပြီးစီးဆင်းမှုစည်းမျဉ်းကိုတိုင်းတာနိုင်တယ်။ လိပ်ပြာပန်းကန်မှ ၉၀ ဒီဂရီလှည့်သောအခါ၊ အဆို့ရှင်သည်အမြင့်ဆုံးဖွင့်ပွဲသို့ရောက်ရှိပြီးလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
Lug Butterfly Valve ၏နိဒါန်း
အဆိုပါ lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကောင်းသောအရည်ကိုထိန်းချုပ်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ lug butterfly အဆို့ရှင်သည်အပြည့်အဝပွင့်လင်းသောအနေအထားတွင်ရှိလျှင်အလယ်အလတ်သည်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ကိုစီးဆင်းသောအခါတစ်ခုတည်းသောခုခံနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အဆို့ရှင်မှဖြစ်ပေါ်လာသောဖိအားကျဆင်းမှုသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးကောင်းမွန်သောစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုလက္ခဏာများရှိသည် ။
Lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ 2.Specification
Valve အမျိုးအစား Lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်
PNï¼ˆMPaï¼ ‰ 0.6ï½ž10.0
ဒီဇိုင်းအပူချိန် Range â‰‰80â "â
သက်ဆိုင်ရာအလတ်စား ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေသန့်စင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်
ဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးအစား စင်တာလိုင်းအမျိုးအစား, တစ်ခုတည်းစားပြီး, နှစ်ဆမတူဘဲနှင့်သုံးဆမွေ့ရာ
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား: Flang နှင့် lug
တံဆိပ်ခတ် Metal Hard တံဆိပ်၊
အဆိုပါ lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏မိခင်
ကိုယ်ခန္ဓာ WCBã€304ã€316ã€316SSã€ CF8M
Disc WCBã€304ã€316ã€316SSã€ CF8M
ထုပ်ပိုး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖိုက်, fluoroplastics
တံဆိပ်ခတ် ရော်ဘာ၊ PTFE၊ သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေကာဗိုက်
၁။ ပိုက်လိုင်းဖြင့် lug butterfly အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်သောအခါနှစ်ဖက်စလုံးရှိအနားကွပ်များအားလုံးကိုမူလီများဖြင့်အသီးသီးတပ်ဆင်ထားသည်။ သို့မှသာအဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်နှင့်အဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိစေသည်။ ဘဝ,
2. အဆိုပါ lug အလွယ်တကူစွန့်ပစ်အနေအထားတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
3. elastic တံဆိပျ torque ကထုတ်လုပ်သည်။
သေးငယ်သောပမာဏ၊ ပေါ့ပါးမှု၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်မှု။
6. Lug butterfly အဆို့ရှင်ကိုအဝေးထိန်းစနစ်နှင့်ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် pneumatic, electric, hydraulic နှင့် manual devices များတပ်ဆင်နိုင်သည်။
7. အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ၏ပစ္စည်းမီဒီယာအမျိုးမျိုးမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး (F46, gxpp, Po, စသည်တို့) အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ lug butterly အဆို့ရှင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။
lug လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏ 5.Aplication
MST Valve Co. , Ltd. သည်စက်မှုဆိုင်ရာအဆို့ရှင်များကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စဉ်းစားဟန်ရှိသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရည်စူးထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိတင်းကုပ်အဖွဲ့ဝင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆို့ရှင်တိုင်းအတွက်ဟိုက်ဒရောလစ်စစ်ဆေးမှု၊ အချို့သောအလုပ်လုပ်သောဖိအားနှင့်အပူချိန်အောက်ရှိတီထွင်ထားသောအဆို့ရှင်အသစ်၏သက်တမ်းကိုစစ်ဆေးသည်၊ အဆို့ရှင်တစ်ခုစီ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။
စက်မှုအဆို့ရှင် OEM ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပြီးစိတ်ကြိုက်မှာယူမှုကိုလည်းလက်ခံသည်။
ယုံကြည်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုး၊ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အောင်မြင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် CE၊ API၊ ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်။
hot Tags:: Lug Butterfly Valve, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, စတော့အိတ်, အမြောက်အများ, အခမဲ့နမူနာ, တရုတ်, Made in China, စျေးပေါ, အနိမ့်စျေး, စျေး, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, CE, အရည်အသွေး, အကြမ်းခံ, တစ်နှစ်အာမခံ